Jaakoob Zuumaa: Hoggantoonni ANC walgahii biroo gafa Roobii waaman - BBC News Afaan Oromoo
Jaakoob Zuumaa: Hoggantoonni ANC walgahii biroo gafa Roobii waaman
Pireezidant Jaakoob Zuumaan aangoo irra akka bu'an wayita dhiibbaan dabalaa jirutti, paartiin biyyattii bulcha jiru ammoo hoggantoota olaanoo paartichaa Roobiitti walgahii waameera.
ANC ibsa baase keessatti, walgahiin kun kan waamame ''akkaataa dabarsa aangoo'' bulchiinsa Zuumaa fi Raamafoosaa gidduutti geggeefamu irratti mari'achuuf akka ta'e beeksiiseera.
Egeree Obbo Zuumaa mari'achuufis qondalonni olaanoon Wiixata kaleessa Johaanisbeerg keessatti walgahii hatatamaa godhanii turan.
Pireezidaantichis himata malammaltummaan walqabatee gaafii aangoo gad-dhiisuu dhihaateef mormaniiru.
Namni ganna 75 ta'an Zuumaan ji'a Muddee keessa hogganummaan paartii isaaniirraa fuudhamee itti aanaa isaanii Raamaafoosaa ganna 65'tti kennamee ture.
Yoo paartiin ANC Zuumaaan aangoo akka dhiisan waamicha godheef pireezidantummaatti kan darban isaani jechuudha.
Wiixata darbe walgahiin taa'ame waa'ee aangoo gad-dhiisuu Pireezidant Zuumaa hin turre jechuunis dubbi himaan ANC dhaabbata oduu Rooyitersitti himaniiru.
Pireezidantin bara 2009 eegalanii aangoo irra jiran kun, Kamisa dhufu biyyicha guutuuf haasaa godhu, haa ta'u malee namoonni paarticha keessa jiran tokko tokko haasaa kanaan asitti akka isaan aangoo gad-dhiisan barbaadu.
Paartii ANC'tti koreen hojii raawwaciiftuu biyyooleessa Kamisa dhufu walgahu.
Koreen kun yoo Obbo Zuumaan akka aangoo gad-dhiisan waamicha dhiheesseef, mormuun baay'ee itti jabaata jechuun Andriiw Haardiing gabaasaan BBC dubbata.
Yoo kanan hin xumuramnes itti fufuun borumtii isaa yaada ka'umsaa pireezidantummaa isaanitti akka quufa hin qabne jedhu irratti sagaleen kennamuun aangoo irraa ari'amuu malu jechuun gabaasaan dabalee dubbateera.
Goodayyaa suuraa Prezidaant Jaakoob Zuumaa aangoo gad-dhiisuu jabeessanii didaa jiru jedhame.
Farra apaartaayidii ta'uun waraana geggeefame keessatti qooda kan qabanii fi mana hidhaa keessa kan turan Obbo Zuumaan, qondaaloota olaanoo ja'an ANC waliin Dilbata darbe wal arganii turan.
Namoonni kunnen akka jedhanitti pireezidaanticha amansiisu hin dandeenye.
Hogganaa partii mormituu fi miseensa ANC duraanii kan turan Juuliyees Maaleemaa Tiwiitarii isaanii irratti Obbo Zuumaan barri isaanii utuu hin xumuramiin aangoo irra bu'uu didaniiru jechuun dubbataniiru.
Himanni Obbo Zuumaarra jiru maali?
2005: Waligaltee meeshaa waranaa bara 1999 ilaalchisee malaammaltummaa maallaqa biliyoona baay'een himatamaniiru. Kun gara pireezidantummaatti hin dhufin dura.
2016: Waligaltee kana ilaalchisee himata 18'n akka gafataman manni murtii irratti ajajee ture
2005: Maatii hiriyaa isaanii gudeeduun himati irratti dhihaate - bara 2006 bilisa ta'an.
2016: Waada biyyattiif galan cabsuun qabeenya mootummaa gargaaramuun mana dhuunfaa isaanii kan Nkandlaa keessatti argamu foyyessanii ijaaruu - boodaa maalaqa jedhame sana deebisanii kafalaniiru.
2017: Walitti dhufeenya maatii Guuptaa, dureessa sanyii Hindii ta'e waliin qabaniin hedduu fayyadamaa ta'aniiru jedhamuun yakkamanii turan - Zuumaas ta'e maatiin Guuptaa garuu waakkataniiru.